GP's Classic Steel #63: 2005 ဆူဇူကီး RM250 PulpMX | သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူမော်တော်ဆိုင်ကယ် catalog, ရုပ်ပုံများ, ratings, ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများနှင့် discusssions
ATV ရင်းမြစ် - သတင်းထုတ်ပြန်ချက် - Nac ရဲ့ / Cannondale POS ... (35205)
Bajaj Avenger 220: တစ်ဦးကဘက်စုံပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ကယ် Blo ... (9878)
KTM ပြိုင်ပွဲဘလော့ (8094)
Yamaha ထုတ်လုပ်မှု Tesseract ဖွံ့ဖြိုးဆဲဖြစ်ပါတယ်? RideA ... (6530)
Pampanga အဘိဓါန် Karylle Solana နိုင်ငံ H ကိုခုနှစ်တွင်အိမ်လော ... (5777)
နေအိမ် → ဆူဇူကီး → GP's Classic Steel #63: 2005 ဆူဇူကီး RM250 PulpMX
19 ဇွန် 2015 | စာရေးသူ: dima | ဟာ Off comments အပေါ် မိသားစုဆရာဝန်ရဲ့ဂန္ထဝင်သံမဏိ #63: 2005 ဆူဇူကီး RM250 PulpMX
If you look up the word “two-stroke” inadictionary, this is the machine you should see. အဆိုပါ 2005 RM250 snapped to attention at the slightest touch of the throttle and ripped through the powerband at warp speed. It was the exact antithesis of the new wave of thumpers taking over the sport.
In late 2004, Suzuki pulled the coup of the century by snagging Ricky Carmichael away from Honda. Amazingly, after delivering five titles in three years (the only one he did not win, was the one he pulled out of due to injury), Honda declined to re-sign the GOAT and Suzuki was more than happy to grab up the winningest rider in AMA history. တွင် 2005, RC would reward Suzuki with its first Supercross title in 24 နှစ်ပေါင်း.
Suzuki Inazuma 250 အိန္ဒိယ, စျေးနှုန်း, ဆန်းစစ်ခြင်း, အသေးစိတ်, အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
2001 Suzuki DR-Z400E: Baja Test – မော်တော်ဆိုင်ကယ်…
ဆူဇူကီး GSR 600 – လမ်းမကြီးစမ်းသပ်မှု – စက် – The Independent
ဆူဇူကီး AN 250 S က
19.06.2015 | ဟာ Off comments အပေါ် 2007 ကောင်းပြီ BatuCars အဖြစ် Spyker F8-VII မှာရှစ်ဆလင်ဒါအင်ဂျင်ကို
တစ်ဦးဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါအတွက် Brammo Enertia Harley-Davidson XR 1200 ခံယူချက် တော်ဝင် Enfield Bullet 500 ဂန္ထဝင် ဟွန်ဒါ DN-01 စမတ် eScooter ဟွန်ဒါ Goldwing ရှေ့ပြေးပုံစံ M1 မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါအိပ်မက်ကလေးများ Dokitto Bajaj Discover Ducati 60 ဆူဇူကီး B-ဘုရင်ကနောက်ဆုံး prototype သင်္ဘော MV Agusta 1100 Grand Prix ဆူဇူကီး B ကိုဘုရင်က Concept ကို Ducati Diavel စက်ဘီး Kawasaki ရင်ပြင်လေး ဟွန်ဒါ DN-01 အလိုအလျောက်အားကစား Cruiser Concept ကို KTM 125 ပြိုင်ပွဲ Concept ကို ဟွန်ဒါ X4 အနိမျ့ Down ဆူဇူကီး AN 650 အိန္ဒိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Classic Moto Guzzi 1000 Daytona Injection Ducati Desmosedici GP11 စက်ဘီး Kawasaki ER-6n ဆူဇူကီး Colleda CO Aprilia Mana 850